AC Milan oo maamuustay laacibkeedii geeriyoodey ee Ray Wilkins + Sawirro – Gool FM
AC Milan oo maamuustay laacibkeedii geeriyoodey ee Ray Wilkins + Sawirro
Raage April 4, 2018
(Milano) 04 Abriil 2018 – Kabtankii hore ee Franco Baresi ayaa horkacayay maamuus ay AC Milan u samaysay laacibkeedii hore ee Ray Wilkins kaasoo maanta ku geeriyoodey dalka uu u dhashay ee Ingiriiska oo uu todobaadkii tegey wadna xanuun kusoo ritey.
61-jirkan ayaa la dhigay isbitaalka St George’s Hospital ee Tooting, koonfurta London, kaddib markii wadnaha laga qabtay isagoo gurigiisa jooga, wuxuuna kaddib ku jirey koomo macmal ah, balse marnaba sooma toosin.
Kooxda AC Milan oo caawa fiidkii la ciyaartay Inter ayaa aad u maamuustay laacibkeedii hore, iyadoo la arkayay taageerayaasha oo gidaarrada tarabuunka kasoo lulaya baannarro uu ku qoran yahay magaca laacibkii hore ee khadka dhexe oo ay ku tilmaameen halyeey.
Inta aysan ciyaartu bilaabanin ayaa daqiiqad loo aamusay, halka Baresi uu ubax saaray funaanad lagu xardhay lambarkii 8-aad ee uu kooxdaasi u xiran jirey. ”Nin akhyaar ah ayuu Wilkins ahaa garoonka gudihiisa iyo dibeddiisaba”. ayuu yiri Baresi.
GOOGOOSKA: Barcelona vs AS Roma 4-1 (Roma oo rafaadkeeda ka shaqaysay)
Maxamed Saalax oo Jurgen Klopp u sheegay in dhaawiciisu.....